Maraykanka, 03 March 2018
Sabti 3 March 2018
Rick Gates oo Qirtey Labo Danbi
Madaxdii hore ee ololaha madaxweyne Donald Trump, Paul Manafort iyo Rick Gates ayaa cadaadis badan oo uga yimid gudiga baaraya faragelinta la sheegay in uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacdey 2016, waxaa ay kala qaateen go-aamo kala gedisan. Rick Gates ayaa qirtey danbiyadi lagu soo eedeeyey labo ka mid ah, halka Paul Manafort uu wajahayo eedeymo horleh.
Kuuriyada Waqooyi oo Baajisay Kulan ay La Yeelan Lahaayeen Mareykanka
Saraakiil ka tirsan dowlada Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pence, uu horraantii bishaan aad ugu dhawaaday inuu la kulmo madax ka socotay Kuuriyada Waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda Pyongang joojinin kulanka daqiiqaddi ugu danbeysay.
Soomaalida Qurbaha oo aad u Daneynaya Barashada Afka Soomaaliga
Maanta waxaa ay caalamka ugu asteysantahay maalinta afka hooyo ee aduunka. Dal iyo dad walbaana waxaa ay xusaan, qiimeeyaan, iskana wareystaan xaalka afkoodu ku suganyahay.
USA: Bannaan-bax ku Aaddan Xakameynta Hubka oo La Qorsheynayo
Dadkii ka bad-baaday weerarkii toogashada ee toddobaadkii hore ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka Florida, ayaa ku baaqay isu soo bax ay ka sameyn doonaan bisha soo socota magaalada Washington ee xarrunta Mareykanka
Cruz oo Maxkamad La Hor-keenay
Wiil 19 ah oo lagu eedeeyay inuu toogasho ku dilay 17 arday oo wax ka baranayay dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida ayaa Khamiisti lasoo taagay maxkamad.
Florida: Ardey Hore oo Dilay 17 Qof
Ardey hore oo looga eryey iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa diley 17 qof, halka 16 kalena uu ku dhaawacay dugsi sare oo ku yaalla Florida.
Sirdoonka oo ka Digey in Ruushku uu Faragaliyo Doorashooyinka 2018
Iyadoo ay isbuucyo uun ay ka harsan tahay doorashooyinka Kongereeska Mareykanka, ayaa saraakiill sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka waxay ka digeen in Ruushku mar kale uu u muuqdo mid isku dayaya inuu faragaliyo doorashooyinka 2018 si lamid ah sida ay sameeyeen doorashadii madaxtinnimo ee 2016.
Ganacsade Mire oo Beeniyay Eedda Mareykanka
Dowladda Mareykanka ayaa Jimcihii sheegtay inay cuna-qabateyn ku soo rogtay seddex qof iyo seddex shirkadood oo lagu eedeynayo inay taageeraan kooxda isku magacowdey Dowladda Islaamiga ah ee ISIS.
Maraykanka oo Cuna-qabateyn Saaray Shirkado ay Midi Soomaali Tahay
USA: Congress-ka oo Ansixiyay Miisaaniyad Cusub
Aqalka wakiillada Mareykanka ayaa iyaguna raacay waddadii senetka si loogu codeeyo, dib-na loogu furo shaqadii dowladda federaalka, taas oo saqdii dhexe ee Khamiistii ku ekeyd miisaaniyadda dowladda.